Azụ azụ T-B3936
Azụ azụ a nwere naanị otu agba, isi awọ gbara ọchịchịrị, na-atụle ụkpụrụ pụrụ iche nke akwa ọhụrụ, isi awọ nwere ike igosipụta njirimara nke ọma.
The dum udi anya obere, agbanyeghị, ohere bụ nnukwu ezuru maka 15.6 ”laptop.The akụkụ akụkụ anya mma n'ihi na nke akwụkwọ ọgụgụ imewe, ọ na-emekwa dum udi nke akpa a, na-eme ka akpa anya ike.The frontage akụkụ na nkenke, maka icho mma, odi kwa nkpa imechi ihe ndi ozo n’abia.
Ikike dị omimi, naanị 0.73 KG, họrọ akpa a, gosipụta ụdị gị!
Nke a bụ akpa azụ dị larịị, iji belata akpa azụ nke aka ya, anyị na-ahọrọ akwa akwa akwa oxford, akwa ahụ bụ ihe dị iche na nke a na-agafe, nke a na-achọ okomoko, nwee mmetụta mmetụ pụrụ iche, agba ahụ na-acha anụnụ anụnụ, na-ele anya ike.
Akụkụ akụkụ dị ezigbo mma, azụ na eji aka ya akpụ akpụ, nke a na-eme akpa a ka ọ nwee ọdịdị dị mma, yana usoro onyonyo na azụ azụ, dị mma maka ahụike spain.
Mpempe zoro ezo na akụkụ azụ, nke eriri siri ike kpuchitere, enwere ike idozi ya na akpa aka, tọhapụ ibu nke njem gị, atụmatụ RFID maka akpa, nwere ike ichebe kaadị gị nke ọma.
Azụ azụ T-B3319
Ngwaahịa Tigernu bụ ihe bara uru na ejiji. T-B3319 bụ ụdị ngwaahịa a. A na-eji akwa ahụ mee ihe nchebe gburugburu ebe obibi na ihe mgbaze mmiri na-asọ mmiri. Ihu igwe na-acha n'ihu n'ihu bụ ntụpọ na-egbuke egbuke, nke nwere ọrụ nke ọdịiche dị na agba na ịchọ mma. Ejiri akụkụ zipa nke azu paaki a nwere akụkụ gbara ya gburugburu, nke na-eme akpa akpa ume dị arọ na-enwuwanye ọkụ na ume.
Azụ azụ T-B3906
Productdị ngwaahịa Tigernu ejirila nwayọọ nwayọọ gbanwee site na usoro azụmahịa na-agbanwe agbanwe na ụdị ntụrụndụ na-eto eto. Ihe mkpali nke imeputa ihe bu ihe n’ile anya ndi n’enwe otutu ihe, dika T-B3906 azu azu. Ihe mmuo nke imeputa sitere na ugbo ala ndi egwuregwu. Enwere ike ịhụ ebumnuche nke onye nrụpụta site na ụcha agba, okirikiri nhọrọ ukwuu na ahịrị nke ihu n'ihu.
Azụ azụ T-B3164USB
Tigernu raara onwe ya nye ịzụlite na imepụta ụdị dị iche iche iji gboo mkpa nke ndị na-azụ ahịa ụwa. T-B3164 bụ akpa azụ pụrụ iche dị otú ahụ
Azụ azụ T-B3905
Ọtụtụ ndị na-azụ ahịa chọrọ akpa akpa ikike, mana ọ ga-enwe esemokwu, mgbe azu paaki niile buru oke ibu, Ọ nwere ike ọ gaghị eyi ejiji, yabụ otu esi elekọta ọrụ na ejiji n'otu oge? T-B3905 bụ ezigbo akpa azụ.
Azụ azụ T-B3599
Stedị stereo na-abụkarị akụkụ bụ isi nke ngwaahịa Tigernu. Enwere ike iwere T-B3599 dị ka onye nnọchi anya kachasị mma nke ọdịdị atọ. A na-ekewa akpa azụ niile iji mee ka akwa ahụ dị ọcha ma dịkwa mma. Usoro kwụ ọtọ na-eme ka akpa azụ dịkwuo nkọ. Ihe ngosipụta nke ihu dị n’ihu na-eme ka akpa azụ na-adị ike ma na-egosipụta ederede.
Azụ azụ T-B3351
Azụ azụ na-egosi ụdị dị iche iche n'ihi akwa dị iche iche. T-B3351, akwa akwa bụ nke nwere akara, ihe a pụrụ iche emepụtara, nwere arụ ọrụ mgbochi ịgba, yana akwa pụrụ iche, na-egosi mmetụta ịda mba. Anyị na-ahọrọ ihe eji agba agba agba aja aja gbara ọchịchịrị, nke mere na knapsack na-ewepụta ihe dị omimi, ala akọrọ na akụkụ nwere mmasị imepe mkpọchi, nke mere na ngwugwu ngwugwu doro anya, enweghị ọghọm ntụrụndụ.
Azụ azụ T-B3237
Tigernu na-emetụta echiche izu ohi na nkọwa niile nke akpaaka. T-B3237 bụ akpa ihe eji egbochi izu ohi. Ejiri ihe eji eme ihe dị n’ihu azụ azụ a. Can't gaghị ahụ ebe mkpọchi mkpọ ahụ na-ele anya. Ihe a na-ahụ anya nke nwere nku yiri ya na akụkụ ya abụọ na-ekpuchi akpa akụkụ ya, na-eme akpa azụ ahụ niile wee jupụta n'echiche imewe, dị ezigbo mma, ma na-echekwa nzuzo na nchekwa nke akpa dị n'akụkụ.
Iji belata mmetụta nke mgbanwe ihu igwe, Tigernu na-ahazi akwa arụmọrụ dị elu. TPU bụ akwa ọhụụ na-ewu ewu.
Azụ azụ T-B3143USB
Ndị mmadụ na-ebute ụzọ maka arụmọrụ mgbe ị na-azụ akpa azụ, yana ụfọdụ ndị na - azụ ahịa agaghị etinye uche dị ukwuu na njirisi ahụ. Akara Tigernu na-agbaso mgbe nile na nhazi nke ọrụ na ejiji. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ngwaahịa dị eji ojii, ihe eji akọ akọ ọ bụghị naanị na-abawanye ọrụ nke akpa azụ, mana ọ na-emekwa azu paaki bụrụ ihe na-adọrọ adọrọ ma na-enye ume.
Azụ azụ T-B3142USB
Otu n’ime ihe omume Tigernu bụ akwa eji arụ ọrụ. Ekike anyị na-ahọrọ na-enwekarị njirimara nke nchebe gburugburu, nkasi obi, ejiji na ihe ndị ọzọ. A na-eji akpa azụ a mepụta akwa a na-akpọ Oxford, nke a na-eyi akwa akwa, nke nwere mmetụta pụrụ iche dịka ajị anụ, akwa a nwekwara uru pụrụ iche nke nguzogide nsogbu.